Sawirro: Ceynte oo Soomaaliya u matalay shirka madaxda IGAD uga furmaya Nairobi - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Ceynte oo Soomaaliya u matalay shirka madaxda IGAD uga furmaya Nairobi
Sawirro: Ceynte oo Soomaaliya u matalay shirka madaxda IGAD uga furmaya Nairobi
Nairobi (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dhawaan gaaray Magaalada Nairobi ee Caasimada Kenya si ay uga qeybgalaan shirka Berri IGAD uga furmayo Nairobi kaasoo loogu hadli doono Arrimo la xiriiro qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha Kenya.
Haddaba waxaa maanta Nairobi ka dhacay kulano lagu diyaarinayey qodobada shirkaas looga hadli doono waxaana si rasmi ah Soomaaliya u matalay wasiirkii Qoysheynta iyo iskaashiga Caalamiga Cabdiraxmaan Ceynte.
Kulankaas ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhammaan madaxdii berri ka qeybgeli laheyd shirka ka furmayo Nairobi, waxaana la sheegay inuu Soomaaliya u matali doono Ceynte kulankaas dhex mari doono wasiirada dowladaha IGAD.
Kulankaas ayaa la filayaa in lagu gorfeeyo sida laga yeeli doono qaxootiga Soomaaliyeed eek u sugan Kenya maadaama ay dowladaas sheegtay inay dhibaato ku qabto isla markaasna ay jeceshahay in laga raro.
Dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inaan la xiri doonin Xerada dhadhaab oo ay ku jiraan Qaxooti badan oo Soomaali ah, waxaana la filayaa in shirkaas ay kasoo baxaan qodobo sheegayo in Kenya ay ogolaato inay qaxootiga sii heyso, maadaama ay iyadaba ka hesho Lacag badan.
Haddaba halkaan hoose ka daawo sawirada shirkaas